Lockdown yakafuridzira chaichoicho mutambo wemitambo muNewbury Greenham Business Park
VENUE VR inguva nyowani yeArcade muchina uri muGreenham Business Park. Yakavhurwa kutanga kwaGumiguru uye parizvino iri kupa zvinonaka zvemasimulators uye vanofarira VR. Iyi kambani nyowani ndiko kuguma kwemugadziri wemakomputa Matthew McMahon weNewbury, uyo akafunga ...
Tile isarudzo yakakurumbira pamadziro ekugezera nepasi, uye inogona kuunza ruvara, pateni, magadzirirwo, kutaridzika kwechimiro uye kunyange runako. Mufambiro wedu pakusarudza mataira ekugezera unozoona kuti iwe unosarudza mataira akanakisa enzvimbo yako.
Imba yevaridzi vedzimba kugadziridza muHebei Yanjin
Iyi posvo inotsigirwa uye yakapihwa necatch brand vadyidzani. Maonero akataurwa muchinyorwa chino ndeemunyori. Uri kufunga nezvekuvandudza imba yekugezera yemba yeMassachusetts? Usati watanga kuita sarudzo nezve kugadzirisa, wadii wafunga kuwedzera imwe nharaunda shamwari ...
Global ceramic tile musika wekukura manhamba muna 2020, mikana mitsva, tarisiro yemakwikwi uye kuongorora kweCOVID-19 muna 2026
"Kukanganiswa kweCovid-19 pane ceramic tile mushumo wekutsvagisa indasitiri, 2020 ″ yakawedzerwa kune nxtgenreports.com chigadzirwa. Rondedzero ye2020 Tiles ibhuku rekutsvagisa rine yakazara data iyo inogona kushandiswa kusimudzira nekubatsira kuyera zvese zvebhizimusi remataira ...
2020-2025 pasi rose uye mataira emadziro musika fungidziro yekukura kwekukura, matunhu maonero
Iyo. yakawedzera kudzidza kwakadzama kwe "pasi uye madziro mataera emusika", ichinyora mutyairi wega wega musika zvakadzama, uye kuitisa ongororo yakaoma yemabhizimusi akamira. Iyi "yepasi uye yemadziro mataera musika" kutsvagurudza kunobatsira kuwana mitsva bhizinesi mikana uye kugadzirisa aripo mar ...
Iyo yakanyanya kunaka peel nematiles, ayo anogona kukwidziridzwa ipapo ipapo
Graphics mataira izvozvi ave nenzvimbo mukicheni uye yekugezera. Nekudaro, kune yakajairwa 5 × 8-tsoka tsoka yekugezera, avhareji mutengo wezvinhu zvematare uye kuisirwa iri pakati peUS $ 1 000 uye US $ 1,500, saka kukwidziridza pasi nematayara ekushongedza anogona kukurumidza kupedza yako kugadzirisa bhajeti. Zvino, yo ...
Fabbrica Marmi e Graniti inotangisa mashanu emarble-maitiro pasi mataera dezeen-logo dezeen-logo
Kukwidziridzwa kweDezeen: Itari brand Fabbrica Marmi e Graniti (FMG) yatanga mataira mashanu anotaridzika emabhura, ayo anoshandiswa kufukidza nzvimbo dzemukati nemidziyo. Ceramic mataira ari chikamu cheMMG's MaxFine dzakateedzana hombe-fomati zvedongo matombo, ayo anonyatsoshandiswa kushambadzira neimba ...
43 zvinhu zvakachipa uye zvine hungwaru zvinozoita kuti ufarire imba yako zvakanyanya
Sezvaunoshandisa nguva yakawanda mumba, unogona kuzviwana uchida kuzorodza nzvimbo yako zvishoma. Kuita shuwa kuti imba yako inonzwa kudziya uye inokoka, kunyanya kwauri, kunogara kuchikosha. (Mushure mezvose, iwe unoshandisa yakawanda nguva pano.) Unogona kutanga kuwedzera nzvimbo yako yekugara nekutenga zvakachipa ...
Mukati nyaya inoshongedza iyo Obama White House
Kune vatengi vekurota, uyezve mhuri yechidiki, Michael S. Smith akavabatsira kugara pa1600 Pennsylvania Avenue muna 2009. Ndiye mukuru wemukati dhizaini. Akashandisa akateedzana ekubatana uye kupenya kuti agamuchire mabvunzurudzo ekugadzira iyo Obama White House. Kismet. Nekudaro, haana kupa mhosva ...
Tubelined Ceramic Matiles
Ruka anopindura mibvunzo yevaverengi nezve dhizaini uye hupenyu hwefashoni vhiki rega rega. Mutumire tsamba pa lukeedward.hall@ft.com uye umutevere pa Instagram @lukeedwardhall ini ndakatanga nematiles ekugadzirisa imba yekugezera. Sarudzo inorema, asi ini ndinowanzo shinga. Imba yacho idiki, saka ini handidi ...
Moody's: Nekuda kwe COVID-19, shanduko mukutenga dzakatungamira mukuwedzera kwemitengo yezvipatara
Joinha isu kubva munaNovember 9th kusvika 11th kuti tidzidze kuti telemedicine yakachinja sei kuunzwa kwemabasa ekurapa uye neramangwana Moody's akataura kuti hurongwa hwechipatara haufanire kungobhadhara mari yakakwira yezvidziviriro zvemunhu uye zvimwe zvekurapa, asiwo nemitengo yakakwira kune veruzhinji const. ..
Gadzira zvipo zvakasarudzika uye ndangariro dzakakosha paRobbins 'Crafter's HEART
Amai nemwanasikana, vachitsvaga vakaroorana vanogara pamwe chete, zviitiko zvekutsvaga mari kuchikoro, mabiko evana ekuzvarwa, kuungana kwemhuri, uye kunyange mabhawa ekuroora; zvirokwazvo, chero munhu arikutsvaga kunakidzwa, kugadzira nemaoko, zvipo zvakasarudzika uye zviyeuchidzo. Crafter's HeArt Studio muBinz. Vakasiya zvine musoro ...